Elona pendenti inamandla ye-Abraxas yokufezekisa yonke into oyifunayo-Ihlabathi leeAmulets
Vumela amakhubalo omlingo abenze ngcono ubomi bakho
Ikhaya > Esona sinamandla sinamandla se-Abraxas ukulawula ubomi bakho kwaye sifezekise yonke into oyifunayo
Esona sinamandla sinamandla se-Abraxas ukulawula ubomi bakho kwaye sifezekise yonke into oyifunayo
Xabiso rhoqo € 19 Intengo yentengiso € 50 Ixabiso lento /nganye
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Akukho kusebenze-- € 19 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo- yenziwe yasebenza- € 29 ISterling yesilivere-Akukho kuVuselelwa- € 42 ISterling Silver-yenziwe yasebenza- € 54 I-Amulet ePhambili yoMbala ayisebenzi- € 32 Amulet oPhezulu woMbala uyasebenza- € 42
Le yeyona nto kufuneka igqibelele kwaye inamandla sidale ukuza kuthi ga ngoku. Le Amulet ekhethekileyo ye-Abraxas inokukunceda ngeendlela ezininzi onokufumana kunzima ukuzikholelwa. Jonga nje ezi zigxeko kwaye uzibonele ukuba bangaphi abantu abaye bafumana izibonelelo ezinkulu zeli phulo.
Ungenza ntoni lo mbhali?
Ngaba usokola kwishishini lakho okanye kwinkqubela phambili yomsebenzi?
Ngaba awukufumani i-Job yokunyusa owawusebenzela nzima?
Umphathi wakho akakuboni?
Abathengi bakho abakuhloniphi?
Akukho mntu ungena kwivenkile yakho?
Ufuna ukuthatha ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo, kodwa uziva uvinjelwe?
Usokola ukufezekisa iziphelo
Ngaba ufuna imali yolongezelelo? Ngaba ufuna imali yemoto, iholide, isipho?
Ufuna ikhontrakthi entsha?
Ishishini lakho sele liza kuhla
Ufuna ukuqala ishishini kodwa awazi ukuba njani okanye njani
Ukhuphiswano lwakho kukususa abathengi bakho
Ungathanda ukuthatha ishishini lakho ukuya kwinqanaba elilandelayo
Ngaba uyadlala ilotto kodwa awunayo nhlanhla?
Ukudlala amakhadi nabahlobo bakho kwaye usoloko ukhulula?
Ngaba akukho thamsanqa kuwo nawuphi na umdlalo?
Ngaba ukufumanisa kunzima ukufumana uthando lobomi bakho?
Ngabahlobo bakho abathandi?
Usapho lwakho alikukhathalelanga?
Ngaba abantwana bakho abakukhathalelanga?
Umfazi / umyeni wakho akasakujonganga ngamehlo afanayo?
Ngaba uziva uncuthuthu ngalo lonke ixesha?
Ayikonwabisi impilo yakho yesondo?
Fumana umva wakho?
Akukho kukhanya ekupheleni komjelo?
Utshiswe njani ngokwasemphefumlweni?
Ngaba uziva uvalwe ngokupheleleyo?
Awuyazi indlela yokuqhubela phambili kwimizamo yakho
Ngaba ufuna ukwaziwa?
Yiba yinkwenkwezi yemuvi?
Yiba nefuthe eliphumelelayo?
Ngaba ufuna ukukhuselwa ngokomoya?
Ukukhupha iimvakalelo ezingalunganga?
Ziphilise ngokweemvakalelo, ngokwengqondo nangokwasemzimbeni?
Ngaba uziva unamandla ngakumbi?
Ukutsala amandla aqinisekileyo?
Ngaba ufuna ukwazi ukuba athetha ntoni amaphupha akho?
Fumana ulwazi lokomoya?
Nxibelelana namandla omoya?
Funda umlingo nobugqwirha?
Zonke ezi zinto zinokwenziwa ngolu hlobo lukhethekileyo lwe-Abraxas
IArathron Ulawula uSaturn nangoMgqibelo
Bethor kulawula uJupiter nangoLwesine
Phaleg kulawula uMars nangoLwesibini
Och Ilanga elilawulayo kunye neCawa
Hagith uVenus olawulayo nangoLwesihlanu
UOphiyeli olawula iMercury nangoLwesithathu
Phul Inyanga elawulayo kunye noMvulo
Ixesha le I-Abrasax okanye i-pendant kaSolomon yenye yendalo yethu endala kwaye yenye yezona zinamandla. Ngapha koko ndinxiba esi siphendu ngokwam 24h / imini. Oku kukhethekileyo Ipendenti inamandla amadala kakhulu kulungiswe ezaziphantse zalahleka kulwazi lomntu. Olu luguqulelo olutsha oluphuculweyo. Sangena iisigil ezikhethekileyo ukuyenza ibe namandla ngakumbi kunenguqulo yangaphambili. Ibinzana eliphezulu nelingezantsi likwi-latin kwaye uthi:
Abrasax potestate est mecum. i-ego autem spirituum iubes
amandla e-Abrasax ikunye nam. ndiyalela imimoya
ISemper Ad Meliora
Soloko ulunge ngakumbi
Konke oku kunye nokunye okuninzi kunokwenziwa ngexesha le-Solomon / Abrasax. Awundikholelwa? Jonga nje kulo lonke uphononongo esinalo kumsesane kunye ne-amulet kwaye leyo yinto nje yencam yomkhenkce.
Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuyinxiba. Akukho nto yimbi, ithenjisiweyo. Akukho mfuneko yokuba unikele okanye ubingelele nantoni na. Abrasax kunye moya wama-olympiki Ndiya kuhlala ndinawe ukukunceda.
Olu luyilo lukhethekileyo ludibanisa enamandla 7 Genii ngohluthiso lwe-AX lwe-Abrasax okanye i-Abraxas zokukhusela kunye namandla.
Ububanzi bepende: 3.5cm -Intsimbi engenanto, isilivere ebalaseleyo, okanye umbala ogqwesileyo wombala
Inketho entsha yokuphakamisa umbala ngokudibeneyo kukudityaniswa kwamagunya epini ye-lapel eqala ukusebenza ngokukhawuleza kunye ne-amulet yesiqhelo efuna iintsuku ezingama-28 zokuvula. Le amulet intsha inokuchukunyiswa ngabanye abantu kodwa ifuna ukuvuselelwa qho kwiinyanga ezili-9. Uya kufumana kwakhona kwakhona kwakhona simahla. Ukutshaja kwakhona nokucoca ungasebenzisa iphedi ekhethekileyo onokuyifumana apha:
Umvavanyi wethu we-amulet u-Bjorn wabhala inqaku elihle malunga neendlela ezahlukeneyo zemali awayezivalele zona. Ungumthengisi wearhente yokuthengiswa kwezindlu kwaye yonke into enxulumene neshishini kunye nobudlelwane ithatha ingqalelo yakhe ukuze aphucule inkonzo yakhe. Unamava nge-lapel pin ye-Abraxas, i-Abraxas amulet kunye neringi, ipini yemali yelap, ipini ye-Asmodeus kunye nepini yemali yeMammon. Ukuba ufuna ukufunda ingxelo yakhe epheleleyo ngezi zinto, yiza apha: ukuvavanya amakhubalo emali